I-Google ihlawulise irekhodi lama-2,42 billion ezigidi ze-EU yi-EU
Blog » I-Google ihlawulise irekhodi lama-2,42 billion ezigidi ze-EU yi-EU. Lokhu kungukuphela kwesiqalo, ezinye izinhlawulo ezimbili ezingabekwa.
I-Google ihlawulise irekhodi lama-2,42 billion ezigidi ze-EU yi-EU. Lokhu kungukuphela kwesiqalo, ezinye izinhlawulo ezimbili ezingabekwa.
Ngokwesinqumo seKhomishini yaseYurophu, iGoogle kufanele ikhokhe inhlawulo ka-EUR 2,42 billion ngenxa yokwephula umthetho wokungathembeki.
I-European Commission ithi iGoogle isizakale ngemikhiqizo yayo yokuthenga yakwaGoogle emiphumeleni yenjini yokusesha yakwaGoogle ukulimaza abanye abahlinzeki bezimpahla. Izixhumanisi zemikhiqizo ye-Google Shopping zazikhona futhi ziphezulu kwekhasi lemiphumela yokusesha, kuyilapho amathuba ezinsizakalo ezincintisanayo njengoba kunqunywe ngama-algorithms wokusesha we-Google abonakala ezindaweni eziphansi kuphela.
Ezinsukwini ezingama-90 i-Google kuzodingeka ukuthi iguqule uhlelo lwayo lwe-algorithm. Ngaphandle kwalokho, kuzobekwa inhlawulo yokufika kuma-5% okuthengiswa okuphakathi kwansuku zonke kwama-alfabhethi, inkampani yabazali yakwaGoogle.
UKhomishani WaseYurophu Wemiqhudelwano uMargrethe Vestager uthe lokho okwenziwe yi-Google akukho emthethweni ngaphansi kwemithetho yokuncintisana kwe-EU. Ngalesi sinqumo, kubekwe isisekelo sokuphenya ngokuzayo.
Ikhomishini yase-Europe iphenya amanye amacala amabili lapho i-Google isithi ihlukumeza imithetho yokuncintisana emakethe yamahhala: uhlelo lokusebenza lwe-Android ne-AdSense.
Funda kabanzi: https:
Thumela Previous I-European Commission ifuna abalamuli babazise ngokwakhiwa…
Post Next Isikebhe saseRotterdam kanye neTNT isisulu sokuhlaselwa kweHacker world